‘Gabadhii aan jeclaaday ee aan muddo shukaansanayay ayaa Kumbuyuutar igu noqotay’ | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA ‘Gabadhii aan jeclaaday ee aan muddo shukaansanayay ayaa Kumbuyuutar igu noqotay’
‘Gabadhii aan jeclaaday ee aan muddo shukaansanayay ayaa Kumbuyuutar igu noqotay’
Robert Epstein wuxuu raadinayay jacayl. Sanadku markaas wuxuu ahaa 2006, Jacaylkana wuxuu rabay inuu ka helo dhinaca Internet-ka.
Isagoo qisadiisa uga sheekeynaya wargeys arrimaha Seyniska ka faallooda, ayuu sheegay in markii dambe uu internet-ka ka helay gabar timo dahabi ah leh oo joogta dalka Ruushka, durbadiina waxay billaabeen inay qoraallo isweydaarsadaan.
Epstein wuu niyadjabay, sababtoo ah wuxuu rabay in arrintu aysan ku ekaanin saaxiibtinnimo qoraal uun la isku weydaarsado.
Wuxuu ku yiri, aan si fiican isku sii dhex galno, laakiin iyadu waxay ahayd qof daggan oo saaxiibtinnimo leh.
Muddo yar ka dib waxay qiratay inay jacayl u qaadday.
“Dareen aad khaas u ah ayaan kuu qabaa. waxaad iila mid tahay sidii ubax qurux badan oo la iigu talagalay aniga… maba qiyaasi karo dareenka aan kuu qabo, mana aqaanno si aan u sharraxo… waxaan kaa sugi doonaa jawaab aan ku farxo, faraheyga waan xakameyn waayay…”
Lahaanshaha sawirkaDAN TAYLORImage captionRobert Epstein wuxuu ka mid ahaa dadkii aasaasay abaalmarinta loo yaqaanno Loebner
Waxay usoo qori jiray hadallo ku saabsan inay ku dhex lugeysay beer cagaaran oo qurux badan iyo inay la sheekeysaneysay hooyadeed.
Waxay sidoo kale kusoo celcelin jirtay qoraallo ku saabsan sida ay uga heshay isaga.
Muddo ka dib wuu ka yara shakiyay, wuxuuna Ivana u diray lambar toos ah oo ay kala soo xiriiri karto. Balse waxay ugu soo jawaabtay email ay uga hadleyso hooyadeed.
Arrinta la yaabka leh ma aysan ahayn in ninkan iskaabulada ah ee kasoo jeeda gobolka Californian uu ku sirmay kumbuyuutar uu u maleynayay inuu bani’aadan yahay
Sida muuqatana, isagii qudhiisa ayaaba dhexda ka galay arrintii, oo ku sirmay.
Markii si kale loo dhigo, mid ka mid ah dadka khubarada ku ah kumbuyuutarrada hadla ee adduunka ugu waaweyn ayaa muddo labo bilood ah shukaansanayay Kumbuyuutar uu u heystay inuu yahay gabar run ah.
Sanad kasta, barnaamijka abaalmarinta lagu bixiyo ee Loebner ayaa loogu talagalay in lagu xaqiijiyo tayada kumbuyuutarrada qoraallada ku jawaaba.
Lahaanshaha sawirkaSCIENCE PHOTO LIBRARYImage captionAlan Turing wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay ee sheegay in Kumbuyuutarrada tayadooda la gaarsiin karo heer ay fakaraan
Aad ugama foga wakhtiga uu qabtay. Run ahaantii 64 sano ka dib heerkii uu sheegayay wey gaareen Kumbuyuutarrada, inkastoo khubarada qaar aysan wali fikraddaas isku raacsaneyn.
Previous articleDaawo:Mareykanka oo si rasmi ah dib ugu furay safaaraddiisii Magaalada Muqdisho
Next articleXOG:Villa Soomaaliya oo diyaarineyso qorshe halis ku ah Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif oo loo adeygsan doono…
XOG: Madaxwayne Farmaajo Iyo Yoweri Museveni Oo heshiiyay… (AKHRISO)
Michael Keating oo ka hadlay Mustaqbalka Somalia Xili Xaalada Dalka…
SAWIRRO “R.W kuxigeenka dalka oo Guddoomiyay Madasha Labaad ee Siyaasadda Dhaqaalaha Qaranka
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Ee Kenya oo kusoo Wajahan Magaalada Muqdisho
Sawirro:Wararkii ugu danbeeyay qarax gaariga loogu xiray xildhibaan Aamin Jeesoow&Khasaaraha
Wasaarada waxbarashada Somalia miyay ka leexatay waddadii lagu yaqaanay?
DHAGEYSO:Ibraahim Deyfullaah Oo Ka Digay Halis Uu Damacsan Yahay Micheal Keating
Turkiga oo helay dokumentiyo qarsoodi ah oo uu Imaaraadku u diray Maraykanka